ford everest car noise cancellation system
ကာလ = 01 - 31 May 2020
Posted By = motorcarmyanmar 15 May 2020
Noise cancellation system ပါဝင်တဲ့ Everest Trend ဟာ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဆူညံမှုတွေကိုသာမက အင်ဂျင်ဆူညံသံကိုပါစစ်ထုတ်ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ ၇၅၀ kg အထိကုန်တင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အတွက် မိသားစုလိုက်ခရီးဝေးသွားချိန်မှာလိုအပ်တာထက်ပိုတောင် သယ်ဆောင်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ ကြမ်းတမ်းတဲ့ ကုန်းဆင်းကုန်းတက်လမ်းတွေကိုတောင် လွယ်ကူစွာသက်တောင့်သက်သာမောင်းနှင်နိုင်ဖို့ Hill Descent Control နဲ့ Hill Launch Assist စနစ်တွေပါဝင်တဲ့ Ford Everest Trend 3.2 Model ကို May လတစ်လလုံးမှာ Ford ရဲ့ May Special Offer အနေဖြင့်...
Everest Trend developing with noise cancellation system definitely deals withanoise environment, moreover it also filters engine noise. Its 750 kg capacity allows more loads than necessary when traveling long family trips. Let us announce Ford's May Special Offer that now you can buy Ford Everest Trend 3.2 Model with just $49,000 and Everest Trend 2.2 Model with just $47,000 which are composed of Hill Descent Control and Hill Launch Assist to help you drive down ferocious hilly terrain comfortably. For more information Ph: (Ygn)-09422691219, 09, 420778210, 0943109348, 0943109348